बाबुरामलाई दुई विकल्प: काठमाडौंबाट लड्ने कि समानुपातिकमा बस्ने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बाबुरामलाई दुई विकल्प: काठमाडौंबाट लड्ने कि समानुपातिकमा बस्ने
काठमाडौं । टिकट बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा वाम गठबन्धन टुक्रिने निश्चित भैरहेको बेला माओवादी केन्द्रले नयाँशक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा–२ छाड्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । गोरखाको २ नम्वर क्षेत्रले वाम गठबन्धनलाई धरापमा पारेको बेला माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौंबाट लड्ने कि समानुपातिकमा बस्ने भन्ने दुई विकल्प रोज्न भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन् ।
उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनमा रहेका नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराइ र माओबादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश दुवैले दावी गरेपछि गठबन्धन के होला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०–४० प्रतिशत सिट बाँडफाँट गरी चुनाव लड्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ। बृहत् बाम गठबन्धनमा पछि मिसिन पुगेका भट्टराईले गोरखासहित १५ प्रतिशत सिट दाबी गर्दै आएका छन्। तर, माओवादी केन्द्र यसका लागि तयार रहेको छैन।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिवीच वामगठबन्धन बनेको थियो । समस्या समाधानका लागि गठबन्धनभित्र कार्यदल बनाएर टिकट बाँडफाँड सुल्झाउने छलफल चलिरहे पनि कार्यदलले एक साता बित्दा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेको छैन । नयाँ शक्तिले कति प्रतिशत पाउने भन्नेसम्मको टुङ्गो लागेको छैन । नयाँ शक्तिले सूर्य चिन्ह लिएर गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ ।
गोरखा क्षेत्र नम्वर २ बाट केन्द्रका लागि नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनावी नतिजा हेर्दा बाम गठबन्धन बन्दा यो क्षेत्रमा गठबन्धनको सहज जित हुने जस्तो देखिन्छ । यही जितको सुनिश्चतामा दुवै नेताले चासो राखेका छन् ।
गोरखामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि गोरखामा दुई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसअघि गोरखामा तीन निर्वाचन क्षेत्र थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको गोरखा क्षेत्रल नं. २ मा दलहरूले पाएको कुल मत हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई १७,०७० मत प्राप्त भएको छ । माओवादी केन्द्रलाई १७,८९४, नेकपा एमालेलाई ७,२०८ र नयाँ शक्ति नेपाललाई ७,९०० मत आएको छ । स्थानीय तहको मत अनुसार गोरखा २ मा बाम गठबन्धनसँग ३३ हजार २ मत छन्, जुन काङ्ग्रेसको भन्दा १५ हजार ९ सय २३ मत बढी हो । यही अग्रता गठबन्धनको चुनाव जितको आधार देखिन्छ ।
बाबुरामले बुधबार साँझ मात्र फेसबुकमा स्टाट्स लेखेर आफू गोरखा–२ बाट चुनाव लड्न लागेको भन्दै मतदातासँग भोट नै मागिसकेका छन् । ‘आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट म गोरखा क्षेत्र न.ं २ बाट प्रत्यासी बन्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यसमा कसैले कुनै द्विविधा राख्नुपर्दैन ।
गठबन्धनमा कुरा नमिले वामगठबन्धन टुक्रिने र गोरखा २ मा बाबुराम र नारायणकाजीबीच भीडन्त हुनेछ । गोरखा दुवै नेताको गृह जिल्ला समेत हो । २०७० को संविधान सभा चुनावमा श्रेष्ठ मकवानपुरबाट चुनाव लडेका थिए । स्थानीय तहकाे चुनावले अहिलेकाे निर्वाचनमा अाफ्नाे पार्टीकाे जीत सुनि सुनिश्चित रहेकाले गाेरखा २ माअाेबादीले छाड्न सक्ने अवस्था छैन ।
न्यु साउथ वेल्सको स्थानीय चुनावमा लड्दै नेपाली मुलका श्री नापित
असनेपाल न्युज । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा अागामी सेप्टेम्बर ९ मा हुन गर्इरहेको स्थानीय चुनावमा नेपाली […]
काठमाडौँ, ३ असोज । आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठ ‘एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार–२०७२’ का सर्वोत्कृष्ट […]
सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष भन्छन्, “बजेट पूर्वाग्रही”
असार ३० । काठमाडौँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मङ्गलबार […]
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजललाई निजीकरण गरेकोमा विरोध प्रदर्शन
भदौ ११,भक्तपुर । भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरेको भन्दै स्थानीय र कलेजका […]
जेठ २५।रौतहट, रौतहटको छोटी भन्सार नाकामा बालबालिका निगरानी बुथ निर्माण सुरु गरिएको छ । रौतहटका दक्षिणी […]